Sidee ayay u dhacaan duufaannada ciidda iyo boodhku? | Saadaasha Shabakadda
ka ciida iyo duufaanka boodhka Iyagu waa ifafaalo cajiib ah, oo waliba khatar ah haddii ay kugu dhuftaan. Waxay ku yareyn karaan muuqaalka magaalooyinka oo dhan daqiiqado gudahood, waxayna ku qaataan waqti dheer in la waayo.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo soo saaro, indhahaaga ha ka saarin kormeeraha maadaama aan si faahfaahsan u sharxi doonno maxay yihiin maxayse sababta ay duufaantan gaarka ahi u dhacaan.
Ciida iyo duufaanka boodhka badiyaa nama soo jiitaan, maadaama ay yareeyaan muuqaalka, waxay khatar weyn ku hayaan wadada. Si kastaba ha noqotee, mahadsanid iyaga, keymaha sida kuwa Amazon waa la quudin karaa, sidaa darteed iyaguna waxay leeyihiin dhinac aad u togan.
Maadaama duufaanku uusan la mid ahayn duufaanta boodhka, waxaan u arki doonnaa si gooni ah:
1 Dabaylaha ciidda
2 Duufaanta siigada
3 Sidee u samaysan yihiin?
4 Sidee looga gaashaaman karaa duufaanta ciidda ama boodhka?
4.1 Gaariga dhexdiisa
Dabaylaha Dabaylku waxay ka samaysan yihiin qaybo ciid ah oo ka yimaada aagagga oomanaha ah ee dusha sare jooga. Marka xawaaraha iyo xoogga dabeysha ay kororto, walxahaas kor baa loo riixayaa, awood u yeelashada safarka masaafo dheer.
Dhulalka ay aadka u soo saaraan waa kuwa ay ku jiraan Ma jiraan wax dhirt ah qaar, xaqiiqda ah in doorbidayo in jajabyada kor loo qaado. Tusaale ahaan, saxaraha Saxaraha ama bannaanka Woqooyiga Ameerika, aad bay u badan yihiin.
Farqiga ugu weyn ee noocan ah duufaannada leh kuwa ciidda waa cabbiraadda jajabyada ku jira hakinta. Markay sidaas tahay, waxay ka yaryihiin 100 makaroon, oo ah 0'01000000cm, dabeecad u oggolaanaysa inay aad u ballaadhaan, oo naga dhigaysa inaan dareemno in deegaanku nijaasoobay. Intaas waxaa sii dheer, astaamahooda darteed, waxay ka hortagaan sameynta daruuro, si roobka meelaha ay ka sameystaan ​​uu aad ugu yaraado.
Meesha inta badan laga soo saaro waa Saxaraha Saxaraha, halkaas oo dabaysha ganacsigu ay mas'uul ka tahay boodhka soo gaadha dalkeenna, gaar ahaan xilliga kulaylaha.
Sameynta ifafaalaha noocan ah waxaa lagama maarmaan ah inay jirto a farqiga kuleylka inta udhaxeysa dhulka iyo lakabyada dhexe iyo sare ee jawiga. Maaddaama dusha sare ee dhulku ka diiran yahay, cufnaanta hawadu oo ay weheliso ciidda ay ka qaadaan, waxay gaari karaan heerar sare oo ka mid ah meelaha loo yaqaan 'troposphere' Laakiin arintu halkaa kuma eka, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin hawadan inay ku dhacdo wax ka qabow si ay xitaa kor uga sii kacdo; iyo Taasi waa waxa ay hawadda qabow ee ka imaanaysa lakabyada sare ee jawigu ay daryeesho..
Sidaa darteed, waa inuu jiraa nidaam wejiga hore ee aagga leh diiran diiran oo oomane ah. Nidaamka hawo ee hore, isagoo qabow, wuxuu kala kaxeeyaa hawada diirran ee qolka, taasoo keeneysa in weelka cadaadiska ah uu kordho. Sidan oo kale, xawaaraha dabayshu sidoo kale wuu kordhayaa, isaga oo iska dhigaya inta udhaxeysa 80 iyo 160km / saacaddii, oo sababa qalalaase. Heerkulka dusha sare, oo aad u kulul, ayaa sababa qulqulka qulqulka.
Qaybaha ayaa sidaas ku sii joogi kara hawada muddo dheer.
Sidee looga gaashaaman karaa duufaanta ciidda ama boodhka?
Ahaanshaha ifafaale yareynaya muuqaalka, waa inaan aad u taxaddarnaa haddii aan helno a. Haddii aad ku nooshahay aag ay caan ku yihiin ama haddii ay mararka qaarkood dhacaan, waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo dhaqmo si aad uga baxdo iyada oo aan lagaa badbaadin.
Haddii aad gaari wadid oo aad si lama filaan ah u aragtid gidaar ciid ah ama siigo kuugu soo socota, waxaad sameyn kartaa laba waxyaalood:
Dhex marainta aad gaari karto xawaaraha ugu badan ee laguu oggol yahay adiga oo aan cidna khatar gelin.
Meel gees ah ku istaag oo sug. Waa ikhtiyaarka ugu badan ee lagu taliyay, laakiin sidoo kale midka badanaa walwalka badan, maxaa yeelay mar dhow ayaa lagugu duubi doonaa ciid, waxna ma arki doontid daqiiqado yar. Si loo hubiyo inaysan waxba kugu dhici doonin, garabka u janjeer (ama ka sii fiican, ka bax waddada haddii aad awoodid), xirna daaqadaha.
Haddii ciid ama duufaan boodh ahi ku soo gaadhaan markaad socotid, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa inaad maaskaro saarto sanka iyo afkaaga. Haddii aad haysato, mari qaar ka mid ah jelly batroolka sankaaga si aad uga ilaaliso inuu qalalo.
Markaad dhamayso, waa inaad ilaalisaa indhahaaga. Si tan loo sameeyo, waxaad ku difaaci kartaa wajiga hal gacan, ama xiro muraayadaha hawo-mareenka ah. Waa inaad ogaataa in muraayadaha indhaha aysan waxbadan ka difaaci karin walxaha; si fiican u isticmaal hawada.
Hadda, waa inaad magan-galyo doonato. Inta badan lagu taliyay ayaa ah galaan aagga leeward (taasi waa, waxay ka ilaalinaysaa jihada ay dabayshu u socoto), sida geedaha dhaadheer gadaashiisa ama geedaha timirta ah; iyo markasta oo aad kari karto, joog meel sare.
Iyo ugu dambeyntii ka ilaali walxaha culus ee duuli kara. Ku caawi naftaada boorsadaada, ama aad ugu soo dhowaato dhulka intaad awoodo.
Ciida iyo duufaanka boodhku waxay sababi karaan dhibaatooyin badan, sidaa darteed sifiican ayaa looga digay. La soco digniinta cimilada ee magaaladaada si aan lagaa qabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Sidee ayay u dhacaan duufaannada ciidda iyo boodhku?
Waad aragtaa, anigu garan maayo inay ogaadeen iyo in kale; iyo haddii tan loo akhrin karo bogga ama; taa badalkeed, tifaftiraha (iskuda) isku mid ah waxaan kugula talinayaa inaad sidaa sameysid, maadaama waxa lagu sheegay dukumintigani ay yihiin iskhilaaf sida cathedral oo waliba ay lasocoto faahfaahin sidaan qabo; iyo hubinta wanaaga bogga laftiisa; Haddii loogu talagalay inay noqoto mid adag oo ujeeddo leh oo lagu kalsoonaan karo intii suurtagal ah iyada oo lala kaashanayo daabacaaddeeda, waxaan ku talinayaa in tifaftiraha / tifaftirayaashu ay fiiro gaar ah u yeeshaan waxyaabaha soo socda:
Dukumentigan waxaa lagu sheegay in farqiga ugu weyn ee u dhexeeya duufaan sandst iyo duufaan boodh ay tahay farqiga u dhexeeya granules ama walxaha sameeya ama sababa duufaanka la sheegay; marka la eego duufaanta dabeysha, waxaa la sheegay in qurubyadeeda ay ka sameysan yihiin ciid; Ka soo horjeedka ciidda oo, sida magaceedaba ka muuqata, ay ceegaagaan qalalaase ama khalkhal xagga saadaasha hawada ah oo dabayl dabeecadeed ka dhalatay barokicinta cufnaanta hawada, taas oo keeneysa fuulitaanka miraha ciidda iyo geeddi-socodka oo dhan. Laakiin dhibaatadu waxay tahay in goorta ama goorta la bixinayo xogta ku saabsan cabbirrada gunta boodhka ee sababa dabeylaha boodhka la siinayo tixraac cabbir ah; tilmaamida iyo sheegida qoraalka / dukumintiga oo si buuxda u cad, »suugaan»: in jajabka boodhku wareegaan ama leeyihiin cabir ka yar 100 mikroon; ama maxaa isku mid ah, 100 mitir mitir; lagu qoray xarafka "mu" oo horgale u ah nidaamka caalamiga ah ee unugyada; oo muujinaya inay ka yar tahay 0,1mm ama> 0,1mm; oo cabirkiisu u dhigmo 0,0001cm oo uusan aheyn 0,01000000cm sida ku cad bogga oo waliba la sheegay inay lamid tahay. Taas oo macnaheedu yahay khalad cabirka stratospheric ah maqaal iska dhigaya inuu yahay mid cilmiyaysan. Oo maxaa ka sii daran. Intaas waxaa sii dheer, waxaa weheliya 7 cutub oo muhiim ah gaar ahaan si ay u siiso adkaan ka weyn; marka waxa ay dhab ahaan samaynaysaa ay ka dhigayaan xaaladda ama bayaanka lagu muujiyay dukumintiga xitaa mid ka sii xun.
Jawaab Adrián Rodríguez Areal
Goorma ayuu bini aadamku bilaabay inuu saameyn ku yeesho cimilada?